Wzọ asaa AI na-emegharị Mgbasa Ozi Email | Martech Zone
Otu izu ma ọ bụ karịa gara aga, akọrọ m otu Ndị ahịa Einstein na-agbanwe njem ndị ahịa n'ụzọ dị egwu, na-ebu amụma ma na-enye nkwukọrịta ahaziri iche na-eme ka mmetụta na ibelata nkụda maka ndị ahịa Salesforce na Marketing Cloud.
Ọ bụrụ na ị lebeghị anya na nke gị subscriber ndepụta njigide N'oge na-adịbeghị anya, ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị debanyere aha na-agbagharị na-aga n'ihu. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka ngwaahịa dị ukwuu, yabụ ndị na-azụ ahịa anaghị arapara n'ahụ ebe ahụ ogbe na gbawara email akwụkwọ akụkọ ọzọ. Ha na-atụ anya na ozi ọ bụla na igbe mbata ha ga-adị mkpa, n'oge, ma baa uru… ma ọ bụghị nke ọzọ, ha na-ahapụ.
Iji dị mkpa, n'oge, na nke bara uru… ị ga-ekewa, nyocha, hazie, ma bulie nnyefe email gị. Nke ahụ agaghị ekwe omume na-enweghị nri toolets… ma ekele ekele keakamere ọgụgụ isi na-accelerating ndị ahịa 'ikike ịzụlite ndụ, na-eku ume mkpọsa na-anọgide na-ebuli onwe ha na igwe mmụta.
Nke a ga - enyere ndị na - ere ahịa aka izipu ozi n’otu ọ bụla ndị debanyere aha ha nwere, nke nwere ọdịnaya ha abụọ nwere.
AI mgbanwe na Email Marketing
30% nke ụlọ ọrụ n'ụwa niile ga-eji AI na ọ dịkarịa ala otu n'ime usoro ahịa na 2020. Site na 2035, a na-atụ anya na AI ga-ebugharị ijeri $ 14 nke mgbakwunye ọzọ na 38% ịrị elu na uru!
N'ezie, 61% nke ndị na-ere ahịa email na-ekwu na AI bụ akụkụ kachasị mkpa nke atụmatụ data ha na-abịa. Nke a bụ ụzọ 7 nke ọgụgụ isi na-emetụta ire ahịa email ka mma.
Ngalaba na Hyperpersonalization - Nkọ amụma na nhọrọ ndị na-ege ntị na-eji algọridim iji tụlee omume nke ọdịnihu nke ndị debanyere aha ma mezie ọdịnaya iji gosipụta ha n'oge.
Isiokwu Line njikarịcha - AI nwere ike ịkwado okike nke isiokwu ndị ga-adabara na onye na-agụ ya, na-agbanye ha ka imepe email. Nke a na - ewepụ ejighị n'aka nke nnwale na mmejọ mgbe ọ na - edepụta usoro isiokwu.
Iweghachite Email - Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ahịa nwere ike ịzaghachi email ị gbahapụrụ ozugbo ezighara ha, ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị adị njikere ịzụta ihe ahụ otu izu. AI na - amata ọdịiche dị n’etiti ndị ahịa a ma na - enyere gị aka izipu ozi ị ga - achọta n’otu oge dị mma, na - eme ka ọnụego ịgbahapụ ụgbọ ahụ belata.
Akpaaka Send Time Optimization (STO) - Site n’enyemaka nke AI, ụdị nwere ike mezuo ahịa atọ - na-ezipụ ozi ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị nye onye ziri ezi. Ọ bụ na ọtụtụ ozi-e nkwado abụghị ihe mgbakasị ahụ? AI na-enyere aka ịhazi oge izipu site na nyochaa ọrụ ndị debanyere aha, nke gosipụtara oge ha.
AI akpaaka - AI abụghị naanị akpaaka. Ọ na-aga n'ihu n'ihu iji nyere aka n'izipụ ozi ịntanetị akpaaka dị mkpa na-atụle mmekọrịta ndị gara aga n'oge gara aga na akara na ịzụrụ.
Njikarịcha ọwa dị mma ma dị mfe - Inyocha akparamagwa nke onye ahịa ya, ihe masịrị ya, yana omume ndị gara aga na nke e buru amụma ya, AI na-enyere aka ịchọpụta ma ha ga-atụgharịkwu nke ọma na ozi email, ozi nzipu ma ọ bụ ọwa ọzọ ọ bụla. Ọ na-ezigazi ozi na ọwa kwesịrị ekwesị.
Akpaghị aka Ule - Ule A / B, nke bu uzo uzo abuo abanyego ugbua na ihe omumu ihe omuma. Nwere ike ịnwale ọtụtụ mgbanwe dị iche iche na mkpokọta na mkpokọta. Ọtụtụ sistemụ na-ezipụ nlele, na-enweta nsonaazụ ọnụọgụ, wee zipụ ndị debanyere aha ndị kachasị nke kachasị.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu na nkọwa zuru ezu na ụzọ ọ bụla nke AI na-agbanwe ahịa ahịa email.
Tags: aiai akpaakaakpaghị aka na-ezipụ oge njikarịchanjikarịcha ọwaazụmahịa einsteinmgbasa ozikeonwenkewa